Shiinaha warshad fasalka qaab-dhismeedka xuubka iyo soosaarayaasha | Zhenyuan
Qaab dhismeedka xuubku waa nooc ka mid ah qaab dhismeedka iyo qaab dhismeedka isku dhafan ee qaabdhismeedka nidaamka, waa qalab sare oo jilicsan oo jilicsan oo filim fillan ah iyo qaab dhismeed caawiyayaal ah oo loo maro dariiq gaar ah waxay ka dhigeysaa wax soo saar gudaha ah culeys culeys ah, iyo culeys hoos yimaada nooc ka mid ah meel qaab, sida jirka ugu weyn, daboolka qaabdhismeedka ama dhismaha oo leh qallafsanaan ku filan oo looga hortago culeyska dibedda ee cidhiidhiga u dhexeeya nooca dhismaha.
Qaab dhismeedka xuubku wuxuu jebiyaa hannaanka qaab dhismeedka toosan ee nadiifka ah, oo leh moodeellada dusha sare ee qalooca ee quruxda badan, oo kooban, nool, adag oo jilicsan, xoog iyo qurux isku dhafan, taasoo dadka siinaysa dareen cusub oo cusub. iyo wakiil, waa qaab dhismeedka, makaanikada qaabdhismeedka, warshadaha kiimikada wanaagsan, sayniska maaddada, teknolojiyadda kombiyuutarka oo ah mid ka mid ah dalabyada kala duwan ee injineernimada, waxay leedahay farsamo sare iyo rafcaan farshaxanimo leh, dusha sare waxay noqon kartaa isbeddello aan macquul ahayn oo leh baahiyaha naqshadeeyaha naqshadaha. Oo ay weheliso jawiga guud, dhismaha muuqaal astaan ​​u ah mashruuca, iyo ficil xoog leh, codsiyo badan oo kaladuwan. Xarumaha dadweynaha ee waawayn, sida nidaamka saqafka garoonka, hoolka garoonka, xarunta bandhigga, xarunta dukaameysiga, goobta gawaarida la dhigto, tas-hiilaadka barxada. , iwm .Waxaa sidoo kale lagu dabaqi karaa xarumaha firaaqada, tas-hiilaadka warshadaha, marinnada laga soo galo iyo astaamaha ama dhismaha buildi ngs, iwm.
Faa'iidooyinka qaab dhismeedka xuubka:
(1) Taako dheer: Qaab dhismeedka xuubku wuxuu leeyahay miisaan fudud oo fudud iyo waxqabadka dhul gariirka, kaas oo tirtiri kara baahida loo qabo taageerada gudaha, ka adkaanta dhibaatooyinka soo wajaha qaab dhismeedka soo jireenka ah ee xaqiijinta dhisme dheer (taageero la'aan), abuuro meel aad u weyn oo muuqata oo aan gaashaan lahayn, iyo si wax ku ool ah kordhinta aagga la isticmaali karo.
(2) farshaxanka:Qaab dhismeedka xuubka ayaa jebiyey nooca qaabdhismeedka dhaqameed, kaas oo ku saleysan qaabeynta, midabka, waxaa lagu dari karaa xaaladaha dabiiciga ah, siiya ciyaar buuxda mala awaalka dhismaha, waxaa loo dhisay iyadoo loo eegayo fikradaha qaab dhismeedka dhaqameed ay adag tahay in la xaqiijiyo qalooca iyo qaabab kala duwan, midabkuna waa hodan, dhadhan xilli xilli leh, wuxuu xaddidan yahay quruxda dhismayaasha cadaadis.
(3) Dhaqaalaha: Waxyaabaha xuubku wuxuu leeyahay gudbis iftiin cayiman, kaas oo yareyn kara xoojinta laydhka iyo waqtiga maalintii isla markaana badbaadin kara tamarta; gudbinta laydhadhka midabbada leh ee habeenkii waxay samayn kartaa muuqaal qurux badan. gaar ahaan dhismaha codsiyada muddada-gaaban ee dhismayaal waaweyn oo taako ah, oo ka dhaqaale badan.
(4) Amniga: Qalabka filimku wuxuu leeyahay dib-u-dhac olol iyo u adkaysi heerkul sarreeya, wuxuu buuxin karaa shuruudaha ka-hortagga dabka; Qaab dhismeedka xuubku waa mid dabacsan, oo qaadi kara barakac weyn mana sahlana in la dumiyo. Qaab-dhismeedka xuubku wuxuu leeyahay miisaanka dhinta ee fudud iyo waxqabadka wanaagsan ee dhul-gariirka.
(5) Is-nadiifin: Maaddada xuubka leh dahaadhka difaaca waxaa loo adeegsadaa dhismaha xuubka, oo aan dheg dheg u dhigin. Boorka ku dhacaya dusha sare ee maaddada xuubka waxaa si dabiici ah loogu maydhi karaa biyaha roobka si loo gaadho saamayn is-nadiifineed oo wanaagsan loona hubiyo nolosha adeegga ee dhismaha.
(6) waqti xaddidan: goynta diaphragm-ka, soo saarida siligga iyo qaab-dhismeedka birta, iwm ayaa lagu dhammeeyaa warshadda, yareynaya waqtiga dhismaha, laakiin leh qaababka shubka hoose ee la xoojiyey ama ka kooban yahay, iwm Isla markaa, ka fogow dhismaha iskutallaabta, goobta dhismaha kaliya silig, qaabdhismeedka birta iyo isku xirka goobta rakibida diaphragm iyo xiisadda geedi socodka, sidaa darteed dhismaha goobta, deg deg deg ah rakibo, oo la xiriirta xadka waqtiga gaaban ee dhismaha.
(7) Codsi ballaadhan: Marka laga eego xaaladaha cimilada, dhismayaasha qaab dhismeedka xuubku waxay ku habboon yihiin aag ballaadhan; Marka loo eego cabirka, waxay noqon kartaa mid yar sida teendho keliya ama sawir gacmeed, ama ballaadhan sida dhismayaasha oo daboolaya tobanaan kun ama boqollaal kun oo laba jibbaaran mitirro.Waxaa jiray xitaa fikrad ah in la daboolo magaalo yar oo la hirgeliyo dabeecadda aadanaha abuuray.
Qaab dhismeedka sawirka axonometric
Sawir gacmeed axonometric ah
Sare u qaadida qaabdhismeedka
Hore: Qaab-dhismeedka Net, Fasalka Qaab-dhismeedka Jinsiga
Xiga: Naqshadaynta Villa
Naqshadeynta Qaabdhismeedka Xuubka